Dhisay Spicer Transfer Case2018-11-15T12:19:41-05:00
Waxaan oolin dhisay Spicer daydo kiiska kala iibsiga, as well as replacement parts for all rebuild kits, xirmooyinka habeeyn iyo ka badan. Waxaan oolin oo dhan lagu daydo kiiska kala iibsiga dhisay, waxay diyaar u tahay inay dunida oo dhan markab maanta waa. Mid ka mid ah call annaga iyo waxaan u bixin karaan caalamiga ah maraakiibta adeeg isku mid ah maalin, call 877-776-4600.
Kiisaska Transfer Spicer waa in ay qalabka caadiga ah ee ugu badan “oo dhan-Ujeedada” baabuurta sida maraakiibta duruf, baabuurta mixaraatka saara barafka oo imanayaan qaadista beerta saliid maxaa yeelay waxa ay ka samatabbixiyaa awoodda ugu badan ee dhan xawaare gudbinta. Kiisaska Transfer Spicer in si toos ah ay weheliyaan karaan si ay isugu gudbiyo Spicer ah kaabayaal ah.
Dhisay daydo Case Transfer Spicer:
Maalgelinta Model 28
Maalgelinta Model 300
Bedelka Codsiyada Case:
qashin qubka & Block Baabuurta
Oil & Rigs Drilling Biyaha
Beeraha & Macdanta Baabuurta
Waayo, gargaar la aqoonsado qaybaha gaarka ah kiiska kala iibsiga aad, view ama download kiiska kala iibsiga jaantus, buugagan iyo liiska qaybaha booqo bogga buugagan.
Wac maanta, hesho kiiska kala iibsiga aad berri!